Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alzeria » Nihazona ny fifandraisana diplaomatika amin'i Maraoka i Algeria
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Alzeria • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fanapahana ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin'i Algeria sy ny fanjakan'i Maroc dia mahomby manomboka ny talata fa ny consulat isaky ny firenena kosa dia hisokatra.
Nanapaka ny fifandraisany diplaomatika tamin'ny Fanjakan'i Maroc i Algeria.
Ny fiatoana diplomatika eo amin'i Algeria sy i Maroc dia manan-kery eo noho eo.
Algeria sy Morocco dia efa nanamafy ny fifandraisana nandritra ny am-polony taona maro.
Nanambara ny minisitry ny raharaham-bahiny any Algeria, Ramdane Lamamra, fa manapaka ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny fanjakan'i Maraoka ny firenena.
"Nanapa-kevitra ny hampiato ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Fanjakan'i Maroc i Algeria manomboka anio," hoy i Lamamra tamin'ny valandresaka nifanaovana tamin'ny talata lasa teo, ary nilaza fa ny fihenan'ny fifandraisana ara-diplaomatika dia noho ny 'hetsika fankahalana' nataon'ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy.
"Ny fanjakana maraokana dia tsy nanakana ny hetsika fanoherana an'i Algeria mihitsy," hoy ny minisitra.
Notsongain'ny minisitra ihany koa ny fanohanan'i Maraoka ny satan'ny mpanara-maso an'i Israel ao amin'ny Vondrona afrikanina ho iray amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanapaha-kevitra.
Alzeria ary Maraoka efa an-taonany maro no nihena ny fifandraisana, indrindra ny momba an'i Sahara Andrefana.
Ny fanapahana ny fifandraisana ara-diplaomatika dia manomboka amin'ny talata fa ny kaonsily isaky ny firenena kosa dia hisokatra hatrany, hoy i Lamamra.
Ny Ministeran'ny raharaham-bahiny maraokana dia tsy naneho hevitra momba ny fampandrosoana.
Ny mpanjaka maraokana Mohammed VI dia niantso ny hanatsarana ny fifandraisana amin'i Algeria.
Algeria tamin'ny herinandro lasa teo dia nilaza fa ny doro tanety mahafaty no asan'ireo vondrona nantsoiny hoe "mpampihorohoro", iray tamin'izy ireo nilaza fa notohanan'i Maraoka.
Ny doro ala tany Algeria, izay nipoaka ny 9 aogositra teo afovoan'ny hafanana hafanana, dia nandoro ala an'aliny hekitara ary namono olona 90 farafahakeliny, anisan'izany ny miaramila 30 mahery.
Ny manampahefana Alzeriana dia nanondro ny rantsan-tànana tamin'ny hetsiky ny fahaleovantenan'ny faritra Berber any Kabylie, izay manitatra ny morontsirak'i Mediterane atsinanan'ny renivohitra Algiers.
Niampanga ihany koa ny manampahefana ny Hetsika ho an'ny Fanapahan-kevitr'i Kabylie (MAK) ho voarohirohy tamin'ny famonoana lehilahy iray ampangaina ho fandoroana olona, ​​tranga iray izay niteraka hatezerana.